राष्ट्रिय सभा निर्वाचन: कुन प्रदेशमा कुन दलको कति मत ? | Latest news of Nepal,world news, articles, literature, Business news, Entertainment and more राष्ट्रिय सभा निर्वाचन: कुन प्रदेशमा कुन दलको कति मत ?
राष्ट्रिय सभा निर्वाचन: कुन प्रदेशमा कुन दलको कति मत ?
माघ ८ गते, २०७४ - १५:२७
काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले माघ २४ गते तय गरिएको राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनको अन्तिम मतदाता नामावली प्रकाशित गरेको छ । राष्ट्रिय सभा निर्वाचनमा ७५३ स्थानीय तहका १५०६ र प्रदेश सभा सदस्य ५५० गरी २०५६ मतदाता रहेको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ। जसमा महिला मतदाता ९०७ र पुरुष मतदाता ११४९ रहेका छन् ।
अाजको अन्नपूर्णमा खबर छ-आयोगका प्रवक्ता नवराज ढकालका अनुसार स्थानीय तहमा ७१८ महिला र ७८८ पुरुष मतदाता रहेका छन् भने प्रदेश सभामा १८९ महिला र ३६१ पुरुष मतदाता छन् । सातवटै प्रदेशबाट एक दलित, एक अपाङ्गता भएका व्यक्ति वा अल्पसंख्यक, कम्तिमा ३ महिलासहित ८ जनाको दरले ५६ जना राष्ट्रिय सभा सदस्य चुनिनेछन् । १/१ दलित र अल्पसंख्य वा अपांगता भएका गरी १४ जनाको बहुमतीय प्रणालीबाट निर्वाचन हुनेछ भने ३ महिला र ३ खुलाको गरी जम्मा ४२ जना एकल संक्रमणीय प्रणालीको आधारमा निर्वाचित हुनेछन् ।
मन्त्रिपरिषदको सिफारिसमा कम्तिमा १ महिलासहित ३ जना राष्ट्रपतिले मनोनित गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।
स्थानीय तहका अध्यक्ष/उपाध्यक्ष वा प्रमुख/उपप्रमुख तथा प्रदेश सभा सदस्य राष्ट्रियसभा निर्वाचनमा मतदाता हुनेछन्। गाउँपालिका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष तथा नगरपालिका प्रमुख र उपप्रमुखको मतभार १८ तोकिएको छ भने प्रदेश सभा सदस्यको मतभार ४८ छ । प्रत्येक प्रदेशको मतसंख्या र मतभार फरक फरक हुनेछ ।
स्थानीय तहमा १५०६ मतदाताको २७१०८ मतभार हुन्छ । प्रदेश सभाको ५५० मतदाताको २६४०० मतभार रहेको छ । राष्ट्रिय सभा निर्वाचनको कुल ५३५०८ मतभार हुन्छ ।
नेकपा माअोवादी केन्द्र-१६
प्रदेश १ का १३७ स्थानीय तहका २७४ र प्रदेश सभा सदस्य ९३ गरी ३६७ मतदाता हुनेछन् । प्रदेश १ मा स्थानीय तहको ४९३२ र प्रदेश सभाको ४४६४ गरी ९३९६ मतभार हुनेछ ।
नेकपा माअोवादी केन्द्र-४५
प्रदेश २ मा १३६ स्थानीय तह छन् । जसमा स्थानीय तहबाट २७२ र प्रदेश सभाबाट १०७ गरी ३७९ मतदाता हुनेछन् । प्रदेश २ मा स्थानीय तहको मतभार ४८९६ छ भने प्रदेश सभा सदस्यको मतभार ५१३६ रहेको छ । प्रदेश २ को कुल मतभार १००३२ हुनेछ । प्रदेश २ मा सबैभन्दा बढी मतभार छ ।
नेकपा माअोवादी केन्द्र-३३
११९ स्थानिय तह रहेको प्रदेश ३ मा ११० प्रदेश सभा सदस्य छन् । यो प्रदेशमा स्थानीय तहको २३८ र प्रदेश सभाको ११० गरी ३४८ मतदाता रहेका छन् । स्थानीय तहमा ४२८४ र प्रदेश सभा सदस्यमा ५२८० गरी ९५६४ मतभार रहेको छ ।
नेकपा माअोवादी केन्द्र-१२
प्रदेश ४ मा ५ स्थानीय तह रहेका छन् । यो प्रदेशमा स्थानीय तहको १७० र प्रदेश सभाको ६० गरी २३० मतदाता रहेका छन्। स्थानीय तहको ३०६० र प्रदेश सभातर्फ २८० गरी ५९४० मतभार रहेको छ ।
नेकपा माअोवादी केन्द्र-४१
प्रदेश ५ मा १०९ स्थानीय तह रहेका छन् । यो प्रदेशमा स्थानीय तहका २१८ र प्रदेश सभाका ८७ गरी ३०५ मतदाता रहेका छन्। जसमा स्थानीय तहको ३९२४ र प्रदेश सभाको ४१७६ गरी ८१०० मतभार हुनेछ ।
नेकपा माअोवादी केन्द्र-५१
प्रदेश ६ मा स्थानीय तहको १५८ र प्रदेश सभा ४० गरी १९८ मतदाता रहेका छन् । प्रदेश ६ मा ७९ स्थानीय तह रहेका छन् । यो प्रदेशमा स्थानीय तहको २८४४ र प्रदेश सभाको १९२० गरी ४७६४ मतभार रहेको छ ।
नेकपा माअोवादी केन्द्र-१९
प्रदेश ७ मा ८८ वटा स्थानीय तह रहेका छन् । यो प्रदेशमा स्थानीय तहको १७६ र प्रदेश सभाका ५३ गरी २२९ मतदाता रहेका छन् । प्रदेश ७ मा स्थानीय तहको ३१६ र प्रदेश सभाको २५४४ गरी ५७१२ मतभार रहेको छ ।
माघ ८ गते, २०७४ - १५:२७ मा प्रकाशित